Omunye wabafundi bethu ocwaninga nokusibhalela ucwaningo lokuqala wayebuza ukuthi ngabe nginayo yini imibono yokuthi ungalukhulisa kanjani lolo cwaningo ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kuhanjiswe kahle futhi kuyaphoqa. Ngenyanga edlule, besenza ucwaningo no-Amy Woodall ngokuziphatha kwezivakashi okusiza ngalo mbuzo. U-Amy ungumqeqeshi wokuthengisa onolwazi futhi isikhulumi somphakathi. Usebenza ngokuseduze namaqembu okuthengisa ekubasizeni ukuthi babone izinkomba zenhloso
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 7, 2015 ULwesihlanu, February 6, 2015 Douglas Karr
Sibona ushintsho impela maqondana nokumaketha kwedijithali futhi le infographic evela ku-Smart Insights yehlisa amasu futhi inikeze imininingwane ekhuluma kahle ngoshintsho. Ngokombono we-ejensi, sibheke njengoba ama-ejensi aya ngokwanda ethola izinsiza eziningi. Sekuyiminyaka ecishe ibe ngu-6 selokhu ngaqala inkampani yami, DK New Media, futhi ngelulekwa abanye babanikazi bezinkampani ezihamba phambili embonini